My iPhone Kwuru Na Ọrụ. Lee ihe The Real Idozi! - Iphone
ihuenyo mmetụ anaghị arụ ọrụ na ekwentị
iphone enweghị ike izipu foto
ka Chineke ga -eweghachi alụm di na nwunye m ma m kwaa iko
My iPhone Kwuru Na Ọrụ. Nke a bụ The Real Idozi!
Ọ bụrụ na iPhone gị kwuru 'Enweghị Ọrụ', ịnweghị ike ịkpọ ma ọ bụ nata oku ekwentị, zipu ozi ederede, ma ọ bụ jikọọ na ịntanetị ọ gwụla ma ị na-eji Wi-Fi. Ọ dị mfe ichefu otu ihe iPhones anyị si dị na ndụ anyị - ruo mgbe ha anaghị arụ ọrụ. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere gị iPhone na-ekwu Enweghị Ọrụ na gosi gị kpọmkwem otu esi edozi nsogbu ahụ .
Gịnị Mere My iPhone asịghị Service?
Gị iPhone nwere ike na-ekwu Enweghị Ọrụ n'ihi nsogbu ngwanrọ, nsogbu ngwaike, ma ọ bụ nsogbu na atụmatụ ekwentị gị. O bu ihe nwute, odighi onye obula kwesiri idozi nsogbu a, ya mere, aga m ejeghari gi site na ntinye aka site na nchoputa nke m choputara kachasi nma mgbe m na aru oru na Apple.
Ọ bụrụ na ị nọ n’elu ugwu, ị nwere ike ịchọrọ ịlaghachi na ọha tupu ị gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ịnọghị, ka anyị kwụsị iPhone gị ịsị Enweghị Ọrụ maka mma.
ngwa a nwere ike ọ gaghị akwado chaja iphone
1. Lelee na ụgbọelu gị gbasara Akaụntụ Gị
Ndị na-ebu ụgbọelu kagbuo akaụntụ ndị ahịa maka ụdị ebumnuche niile. Anụla m banyere ikpe ebe a kwụsịrị iPhones n'ihi na onye ọrụ ahụ na-enyo enyo na aghụghọ, ịkwụ ụgwọ ndị ahịa abịaghị n'oge, yana gbasara ndị di na nwunye nwere obi ọjọọ n'ezie achọghị ịnụ site na ha bụbu.
Ọ bụrụ na otu n’ime ihe ndị a dabara na gị, nye onye na-ebu gị oku, naanị iji jide n’aka na ihe niile dị mma. Gị iPhone ga-asị Enweghị Ọrụ ma ọ bụrụ na akagbuola akaụntụ gị, nke a bụ ihe a na-ahụkarị, mana eleghara anya maka nsogbu a.
Ọ bụrụ n’ịchọta nsogbu Enweghị Ọrụ bu na-akpata gị ụgbọelu, lelee m ekwentị atụmatụ tụnyere ngwá ọrụ iji mụta otu ị ga - esi chekwaa ọtụtụ narị dollar kwa afọ site na ịgbanwe ihe. Ọ bụrụ na ọ bụghị nsogbu nke onye na-ebu gị (na ọtụtụ oge nsogbu a abụghị), ọ bụ oge iji lee software nke iPhone gị.
2. Melite iPhone gị Software na ụgbọelu Settings
A otutu nke iPhones nke ndi mmadu kwuru na Onweghi oru mgbe Apple weputara iOS 8. Ọ bụ ezie na nsogbu ahụ ka dị kemgbe edozi, mmelite iOS na-enwekarị ndozi nke ndozi maka obere ahụhụ sọftụwia na-adịkarịghị nwere ike ibute nsogbu Enweghị Ọrụ. Can nwere ike ịga n'ihu na otu n'ime ụzọ abụọ:
Ọ bụrụ na ị nwere ike jikọọ na Wi-Fi , ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ngwanrọ ngwanrọ maka iPhone dị site na ịga Ntọala -> General -> Mmelite Ngwanrọ .
Ọ bụrụ na mmelite iOS adịghị, gaa Ntọala -> General -> Banyere ịlele maka a ụgbọelu ntọala melite . Enweghị bọtịnụ ịlele maka mmelite ndị a - naanị nọrọ na Ihe gbasara peeji nke 10 sekọnd ma ọ bụ karịa, ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe na-apụta, ntọala ndị na-ebu gị dị ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịnweta Wi-Fi , jikọọ iPhone gị na kọmputa gị ma jiri iTunes ma ọ bụ Finder (naanị na Macs na-agba Catalina 10.15 ma ọ bụ karịa) iji lelee ma ọ bụrụ na melite ngwanrọ dị maka iPhone gị. Ga-akpaghị aka ịjụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ imelite iPhone gị ma ọ bụrụ na ọ dị. iTunes na Finder na-enyochakwa maka mmelite ntọala ntọala na-akpaghị aka, yabụ ọ bụrụ na ọ jụrụ, ọ bụ ezi echiche imelite nke ahụ kwa.
Ọ bụrụ na iPhone gị kwuru na Onweghị Ọrụ mgbe emesịrị melite ngwanrọ gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ngwanrọ gị adịla ọhụrụ, ọ bụ oge ịbanye na ime ụfọdụ nchọpụta nsogbu.
Tọgharị ntọala ntọala netwọ iPhone gị na nrụpụta ụlọ ọrụ nwere ike idozi ụdị nsogbu cellular na Wi-Fi metụtara na iPhone gị. Nke a 'echefuru' netwọkụ Wi-Fi gị niile, yabụ ị ga-abanye na ha ma tinyekwa okwuntughe Wi-Fi gị. The No Service nsogbu nwere ike ifu efu mgbe gị iPhone reboots.
kedu ihe eji ele apple m anya ngwa ngwa
Iji tọgharịa Ntọala Ntọala, mepee Ntọala -> Ozuruọnụ -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala Ntọala . Tinye passcode iPhone gị, wee pịa Tọgharia Network Ntọala mgbe mmapụta mmapụta pụtara n’akụkụ ala ihe ngosi iPhone gị.
4. Lelee Cellular Ntọala Na Gị iPhone
Enwere otutu ntọala data cellular na iPhone gị, ma ọ bụrụ na edozighi ihe n'ụzọ ziri ezi, iPhone gị nwere ike ịsị Enweghị ọrụ. Enwere ike gbanwee ntọala na mberede, na mgbe ụfọdụ enwere ike idozi nsogbu ahụ naanị site na ịgbanwu ntọala ma laghachi na ya.
Nsogbu nke ịchọpụta ntọala cellular na iPhone gị bụ na ihe ị na-ahụ na Ntọala -> Cellular dịgasị iche site na ụgbọelu na ụgbọelu. Ọ bụrụ na ịhụghị ọnọdụ m kwuru na ngalaba a, gaa na aro na-esote - ị naghị efu ihe ọ bụla. Ndị a bụ aro m:
Gaa na Ntọala -> Cellular , ma gbaa mbọ Data Cellular dị na. Ọ bụrụ na ọ dị, gbalịa gbanye ya wee laghachi ọzọ.
Gaa na cellular Nhọrọ data -> amgagharị ma gbaa mbọ hụ Amgagharị olu agbanwuru. Voice Roam kwesịrị ịdị maka ọtụtụ mmadụ na United States . Ndị na-ebu ya anaghị akwụ ụgwọ maka ịgagharị cellular dịka ha na-adịbu. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, otu n’ime ndị edemede anyị dere edemede nke kọwara etu esi eme ya olu na ngagharị data na-arụ ọrụ na iPhone gị . Okwu ịdọ aka na ntị : Ọ bụ ezi echiche iji gbanyụọ Voice Roaming mgbe ị na-eme njem mba ụwa iji zere a oke ụgwọ ekwentị mgbe ị bịara n'ụlọ.
Gaa na Ntọala -> Ndị na-ebu ya ma gbanyụọ nhọrọ ụgbọelu akpaka. Gị iPhone nwere ike ịkwụsị ikwu Enweghị Ọrụ ma ọ bụrụ na ị jiri aka gị họrọ nke netwọk mkpanaka iji jikọọ. Ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ agaghị lee nhọrọ a na iPhone ha, nke ahụ zuru oke. Ọ metụtara naanị ụfọdụ ndị na-ebu ụgbọelu.
Kaadị SIM nke iPhone gị jikọtara iPhone gị na netwọ cellular ụgbọelu gị. Ọ bụ otú onye na-ebu gị si dị iche na iPhone gị na ndị ọzọ niile. Mgbe ụfọdụ, gị iPhone ga-akwụsị na-ekwu Ọ dịghị Service nanị site na iwepu kaadị SIM gị na iPhone na-etinye ya azụ na ọzọ.
Ọ bụrụ na ijighi n’aka otu esi ewepu kaadi SIM gị, gụọ usoro 1-3 nke ederede m banyere mere iPhones mgbe ụfọdụ na-ekwu 'Enweghị SIM.' Iji wepu kaadi SIM gi, inwere ike iburu a
6. Lelee Maka Mmebi Mmiri
Ọ dị mfe ịghọta ihe kpatara iPhone nwere ike ịsị 'Enweghị Ọrụ' ma ọ bụrụ na agbajikwa ya, mana mmebi mmiri nwere ike ịbụ ihe a na-adịghị ahụ anya na nke aghụghọ. Ọ bụrụ na iPhone gị malitere ịsị 'Enweghị Ọrụ' mgbe ọ rụsịrị mmiri, enwere ezigbo ohere na mmebi mmiri na-akpata nsogbu ahụ.
Apple anaghị edozi iPhones ndị mmiri mebiri - ha dochie ha. Ọ bụrụ na ị nwere AppleCare +, ọnụ ahịa nke dochie iPhone mebiri emebi enweghị isi ma e jiri ya tụnyere ihe ọ ga-efu ma ọ bụrụ na ịnweghị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị ọnụ ala karịa, chọpụta nke a Mmezi Nhọrọ ngalaba dị n'okpuru.
kedu ka m ga -esi nweta ụlọ ahịa ngwa
7. Ndabere na weghachite iPhone gị, mana gụọ ịdọ aka na ntị ahụ na mbụ!
Nrụrụ ngwanrọ nwere ike ibute ihe niile ịwụfu batrị gabigara ókè ka iPhones na-ekpo oke ọkụ nye nsogbu dika nke a. Gbaa mbọ hụ na ị ndabere gị iPhone ka iTunes ma ọ bụ iCloud ma ọ bụrụ na ị họrọ ịnọgide, n'ihi na iweghachi gị iPhone erases ihe niile n'elu ya.
An Oke Ndụmọdụ Dị Mkpa
Iweghachi iPhone gị mgbe ọ na - enweghị ike ijikọ na netwọkụ cellular bụ dị nnọọ ize ndụ , n'ihi nke a: Otu iPhone nwere na-arụ ọrụ tupu ya ga-eji mgbe a weghachi. Ọ bụrụ na ị weghachi iPhone gị ma ọ ka na-ekwu Enweghị Ọrụ, ọ ga-abụ nke a na-agaghị eji eme ihe. Gaghị enwe ike ime ihe ọ bụla: weghachi iPhone gị, anaghị eji ngwa gị ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere ekwentị nchekwa dịnụ ma ị dị njikere itinye ihe egwu ahụ, weghachite iPhone gị nwere ike dozie esemokwu a, mana enweghị nkwa. Anaghị m akwado ka ị gbalịa iweghachi iPhone gị belụsọ ma ịnwe Apple Store dị nso.
8. Kpọtụrụ ụgbọelu gị ma ọ bụ rụkwaa iPhone gị
Mgbe ụfọdụ ndị na-ebu ya nwere koodu ebido pụrụ iche nke nwere ike idozi nsogbu ahụ mgbe iPhone na-ekwu Enweghị Ọrụ. Koodu ndị a na-agbanwe ọtụtụ oge na enwere ọtụtụ ndị na-eweta ndepụta aha ebe a, mana enwere ohere onye na-ebu gị nwere ike inyere gị aka na ekwentị. Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, onye na-ebu gị ga-eziga gị na Storelọ Ahịa Apple ka onye ọrụ nyocha chọpụta iPhone gị.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ịga na Storelọ Ahịa Apple, ọ bụ ezigbo echiche ị ga-akpọ n'ihu ma ọ bụ gaa n'ịntanetị ị ga-enwe oge ị ga-aga na Genius Bar tupu ị rute. You nwere ike ịkwụsị iguzo obere oge (ma ọ bụ ịzụta Mac ọhụrụ) ma ọ bụrụ na ịmeghị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ego, Pulse ga-ezute gị na ebe ị họọrọ, dozie ekwentị gị taa, ma kwe nkwa ọrụ ha maka ndụ.
Atụmatụ na Ngwọta Ndị Ọzọ
Otu n'ime nsogbu kachasị na nsonaazụ gị mgbe iPhone na-ekwu Enweghị Ọrụ bụ na batrị ya na-amalite ịnwụ ngwa ngwa. Ọ bụrụ na nke ahụ na-eme gị (maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ndụ batrị zuru oke n'ozuzu ya), edemede m banyere otú ịzọpụta iPhone ndụ batrị nwere ike ime ka uwa nke ihe di iche.
Ọ bụrụ na nke a abụghị oge mbụ ị na-abanye na nsogbu Enweghị Ọrụ ma ị rijuo afọ, lelee UpPhone's ụgbọelu mkpuchi map ma ọ bụ jiri nke m ekwentị atụmatụ tụnyere ngwá ọrụ iji mata ego ole ezi na ụlọ gị nwere ike ichekwa site n ’ịtụgharị gaa na ụgbọelu ọzọ.
Afọ 20 gara aga, mkpesa gbasara enweghị ike ịkpọ oku ekwentị site na ebe ọ bụla anyị nwere ike ịhụ dị ka 'nsogbu okomoko', mana ihe agbanweela, na ike anyị nwere ijikọ ọnụ dị ezigbo mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị. N’isiokwu a, ị mụtara ihe mere iPhone gị ji ekwu Enweghị ọrụ yana otu esi edozi ya. Enwere m mmasị ịnụ nke edozi edozi nsogbu Enweghị Ọrụ maka gị na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a.